Hana qaadka jacaylka hadmaa kuugu horaysay sxb ? maxaad kataqaanaa doontii jacaylka ?
Ubax baan kuusidaa kuula soo ordee maad iga aqbali
MAXAAN KU GARAN KARAA IN JACAYL I ASIIBAY? JACAYLKUSE DHAAWAC MALEEYAHAY?
Dhamaan su'aalahani waa su'aalo waawayn oo u baahan in kaligood buug laga qoro haddii ay noqoto in laga jawaabo, balse waxan isku dayayaa in aan tusaale yar ka bixiyo.
Jacaylku waa wax rabaani ah oo ALLE la abuuray aadamiga, waa dareenka haga rabitaanka qofka, waxad u bahan kartaa gaari, guri, dhar ama labis aad xidhatoIWM. waa inaad heshaa nooca aad jeceshahay waad ku qanci haddii uu yahay kii aad jeclayd.
Sidaa oo kale ayuu jacaylku dareenka aadamiga ula shaqeeyaa, wuxuna ku jiraa dhiiga qofka iyo dareemayaashiisa. Haddaba marka jacayl lasoo hadal qaado waxa qofkasta maskaxdiisa kusoo dhacaya wiil iyo gabadh is jecel. Dabcan waa jacaylka ugu faca wayn ee addduunka ka jira kan ragga iyo dumarku.Jacaylka ragga iyo dumarku malaha sifo jirta oo kama danbays ah oo la siin karo.
Waxay ubaahantahay inuu qof soo arko haddii aan si kale u dhigo qofka jacaylka soo maray durba waa garan karaa micnaha jacaylka, balse kan uu ku cusubyhay horay uma fahmo durtadiiba.
Jacaylka wiil gabadh u qaado ayaa ah kan ugu mucjisada badan ee adduunka ka dhaca, balse haddii kan wax jeclaaday ama la jeclaaday uuna fahamsanayn qiimaha jacaylka markaa khatartiisa ayuu wataa.
Jacaylku wuxu ku yimaada maqalka, araga iyo dareenka. Jacaylka araga ku yimaadaa wuxu la xidhiidhaa quruxda iyo xaragada qofka la arko.Haddii qof dhalinyaro ah isha ku dhufto qof jinsigiisa kale ah, siiba haddii wiilku milicsado gabadh qurux iyo xarago usaaxiib ah waxa laga yaabaa inuu jacayl uqaado gabadhii iyadoo u ogayn, jacaylkuna wuxu ku faafaa qalbigiisa iyo jidhkiisa oo dhan sida daad oodda soo goostay ama duufan dabaylo wata ama barafuun hawada la raaciyey.
Dhanka kale jacaylku wuxu ku bilaaban karaa si tartiib ah, sida in wiil ama gabadh looga sheekeeyo jinsigiisa kale, sida wiil ama gabadh dabeecad iyo qurux leh, kadib markiii aad aragtay qofkii lagaaga sheekeeyey oo ad wada sheekaysataan oo la is barto waxa laga yaabaa inaad isku aragto calaamadaha jacaylka.
Sideed hadaba ku garan kartaa inaad wax jeceshahay ama lagu jecelyahay?
Calaamadaha jacaylka lagu garto waxa ka mid ah:
U omanaan ama hillow aad uhilwdo inuu kula joogo qofka aad jeceshahay mar walba.
Aadigoo dhib kala kulma ka fekerka waxyaabaha kale ee aan ka ahayn jacaylkaaga, oo mar walba waxad ka fekertaa qofkii aad jeclayd sida inuu kula joogo.
Garaaca wadnaha oo saa'ida marka aad maqasho magaca ama codka qofka aad jeceshahay ama aad kula kulanto dariiq ama guri si kadis ah.
Wuxu qofku jeclaadaa in goor walba looga sheekeeyo samaanta iyo wanaaga qofka uu jecelyahay,mana u dulqaato cay ama aflagaado loo geysto qofka uu caashaqay.
Wuxu qofka wax jeceli jeclaadaa inuu goor walba daawadomuuqaalka qofka uu jecelyahay ,ama dhagaysto codkiisa.
DHamaan kuwani waa calamadaha jacaylka lagu yaqaan,jacaylka dhabta ah ee raalliga la isaga yahay EE aas aaskiisu wanaagsanaa waakan kor uqaada shucuurtaada dadnimo ee kusiiya kalsooni, qabwayni,qani-nimo maskaxeed, isla markaana kuu muujiya inaad gaadhay guushii ugu waynayd noloshaada, ayna waajib kugu tahay inaad u adeegto kan aad jeceshahay, kan ku jecelna waa la mid.
Haddii aad ka fekerto qof kale in ka badan inta aad naftaada ka fekerto markaa badwayn jacaylbaad dhex dabaalanaysaa ee ogow.
Jacaylka dhabta ahi waa kan ujeedkiisu yahay mustaqbal wanaagsan inta kale way burburaan haddi dhabtu timaado
Abwaan Siciid Saalax Axmed